Maalinta: Sebtember 28, 2019
Bandhigga Gacanka 'Gulfzmir Gulf Festival', oo marxaladi saddexaad qaatay sanadkan, ayaa ku bilaabay sawirro midab leh. Duqa Magaalada polzmir ee Magaalo Weyn Tunç Soyer ayaa ciyaaray dhawaaqa ugu horeeya ee jinsi kasta oo farxad geliyay xafladda. Kooxda oo dhami waa dumar oo keliya [More ...]
Seddex Xarumood Oo Cusub Oo Ku Yaal Magaalada
Dhismaha waaxda Ankara ee Dawlada Hoose ee Magaalooyinka Cilmiga Sayniska, hal marin ee isgoyska Isutaga xaafada Konutkent iyo Nawaaxiga Yaşamkent, iyo U-lee-dhiska kadib markii laga soo galo albaabka hore ee Jaamacadda Başkent. [More ...]
Fursadda Helitaanka Isbitaalka Magaalada Bilkent ayaa sii socota
Duqa Magaalada Ankara Mansur Yavaş, oo ka mid ah ballanqaadyadii lagu sameeyey doorashadii Cusbitaalka Bilkent City, ayaa faray in la dhigo khadka baska. Agaasinka Guud ee EGO, 25 Ilaa Bishii Luulyo “112 Ulus-Bilkent City [More ...]
Duqa magaalada Seçer: “Waxaan ugu baahanahay Deked Xeebeedka Mersin”
Mersin Metropolitan degmada Duqa Hemant Secor, badda Turkiga ayaa muujinaya kala duwanaansho u ah in ay noqdaan qolka labaad ee Mersin Chamber of Shipping 30. Kaqaybqaatay Barnaamijka Dabaaldega Sanadguurada. Soo dhaweyn huteel gaar loo leeyahay [More ...]
Nidaamyada tareenka waxay noqon doonaan meel u rogaya gaadiidka Sakarya
Madaxweyne Ekrem Yüce, oo aaday magaalada Seoul ee caasimada Kuuriyada Koofureed, si uu baaritaan ugu sameeyo nidaamyada tareenka, Güney Si loo helo macluumaad ballaaran oo ku saabsan nidaamyada tareenka, in si dhow loo arko tikniyoolajiyadda casriga ah iyo in la xoojiyo iskaashiga. [More ...]
Duqa Magaalada Mersin Metropolitan Vahap Seçer wuxuu sheegay inay bilaabeen inay casuumaad u diraan shirkadaha loogu tala galay Mersin Metro oo loo geeyay barnaamijka maalgashiga 2019 ee Madaxtooyadu. Isagoo sheegay inay yimaadeen marxalad cusub Mersin Metro, ayuu yiri Seçer, davet Martiqaad shirkadaha [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, dayactirka wadooyinka ee magaalada, dayactirka iyo dib u dhisida ayaa wali socda. Macnaha guud, shaqada superstructure-ka ayaa laga fulinayaa Dilek Street ee Degmada Tavşantepe ee Degmada Izmit. Waaxda Sayniska [More ...]
Xad-gudubyada ka yimaada mas'uuliyadda Dawladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay muhiimad weyn u leedahay adeegsiga muwaaddiniinta gaadiidka magaalada. Baarayaal-wixiyeyaasha iyo wiishashka dushooda waxay sidoo kale bixiyaan raaxada gaadiidka ee muwaadiniinta. [More ...]
Waxay soo baxday in wadada mashruuca Kanal Istanbul, oo inbadan laga wada hadlay, ay sedex khaladaad firfircoon ku jiraan. Mashruuca muranka dhaliyay ee Istanbul Istanbul wuxuu umuuqday inuu yahay qatar dhulgariir. 2014 mashruuc maqaal [More ...]
Poke Halkevi Wuxuu Furay Raaxada Salim Dervişoğlu Street
Degmooyinka Başiskele, Gölcük iyo Karamürsel oo ay adeegsadaan gaadiidka dadweynaha iyo wadada kale ee loo maro wadada D-100 wadada Izmit Salim Dervişoğlu Avenue si loo yareeyo taraafikada ayaa laga dhigay istaag. Joogsi dadweyne oo dhowaan la dhisay [More ...]